Shir Lagaga Hadlayay kor u qaadista Dhaqaalaha oo ka furmay Hargeysa | Somaliland.Org
July 29, 2012	HARGEYSA (Somaliland.Org)- Shir lagaga wada hadlayay toosinta rukunka dhaqaale ee dalka ee qorshaha shanta sanno isla markaana ay ku kulmeen hay’adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ayaa maanta lagu qabtay caasimada dalka ee hargaysa.
Shirkan oo lagu falanqeeyay sidii loogu tabaabushayn lahaa ka dhabaynta qorshaha shanta sanadood ee horumarinta qaranka Somaliland, waxaana shir gudoominaysay wasaarada kaluumaysiga iyo kheyraadka bada.
Shirkani waxa lagaga dooday mudadii uu socday dardar galinta rukunka dhaqaalaha oo ay iska kaashanayaan dawlada Somaliland iyo hay’adaha caalamiga ah kaasi oo hadafkiisu yahay in la gaadhi qorshah horumarineed ee shanta sano.
Agaasimaha guud ee wasaarada kaluumaysiga iyo kheyraadka bada md. Mxd cilmi Aadan ayaa tilmaamay muhiimada shirkan uu u leeyahay qaranka jsl iyo sida ay lama huraanka u tahay dejinta qorshaha hour socod ee santa sano,agaasimaha Guud waxa uu sheegay in Wasaarada Kalluumaysigu ay xudun u tahay qorshaha diyaarinta.
Sidoo kale Agaasimahayaasha Guud ee Wasaaradaha Ganacsiga, Abiib Axmed Cali,Maaliyada Saleebaan Jaamac Diiriye iyo madaxa xafiiska isku xidhka hay’adaha caalamiga ah ee wasaarada qorshaynta ayaa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay
Shirkan lagaga hadlayay taabogalinta rukunka dhaqaalaha oo hadafkiisu yahay in la gaadhi qorshaha horumarineed ee shanta sano waa mid laba biloodkiiba hal mar laysugu yimaado waana talaabo muujinaysa hayaanka horumarineed ee dhanka quman loo qaaday.
Previous PostWasaarada Warfaafinta oo u digtay Wargeys Cusub oo aan diwaan-gashanaynNext PostXukuumadda Iyo Xildhibaan Nac-nac Oo Guri u dhisay muwaadin xanuunsanayay muddo 50 sanadood ah	Blog